पतन मा एक विवाहित मानिस प्रेम, र पहिले नै प्रश्न उठ्छ: यो कसरी गम्भीर हुनेछ । उहाँले प्राप्त हुनेछ सम्बन्धविच्छेद र म साँच्चै गर्न चाहनुहुन्छ. यो एक मामला छ, यसको खोज बनाउन हुनेछ दुवै जीवन एक नाटक वा एक आनन्दित समाप्त भएको छ । तर पहिलो प्रश्न छ: म लिन गर्नुपर्छ यस सम्बन्ध मा सबै. तपाईं गर्न सक्छन् निस्सन्देह हुन्छन् भने मात्र एक पहिले नै अवस्थित विवाह-र-सेतो । धेरै मानिसहरू बाहिर सम्म फिर्ता पछि । यदि तपाईंलाई थाहा छ कि यो मानिसको विवाह छ, तपाईं अन्य अवसर मा जोखिम मूल्यांकन । तर यो सजिलो छैन । असंख्य विवाह पृथ्वीमा थाले जब एक वा दुवै साझेदार विवाह गरेका थिए । र पनि, असंख्य सम्बन्ध छ, अस्तित्व मा धेरै वर्ष को लागि नक्षत्र विवाहित मानिस र. केही महिला लागि बस्ने धेरै वर्ष मा आशा छ कि उहाँले बनाउन हुनेछ आफ्नो प्रतिज्ञा साँचो आउन र अन्य निकास तर उहाँले कहिल्यै गरे । उहाँले शायद कहिल्यै थियो.
यो महत्वपूर्ण प्रश्न छ के म आशा देखि, एक विवाहित मानिस, तर म छु कि उहाँले विवाह छ. केही महिला एक विवाहित मानिस कडाई बन्द-सीमा छ । यो एक महान मनोवृत्ति । तपाईं अक्सर तिनीहरूलाई लागू पनि छ । तर, केही अवस्थामा, तपाईं, थाहा मानिस राम्रो र सद्भाव यति ठूलो छ कि एक फरक तपाईं राख्न सक्छ. कहिलेकाहीं उहाँले विवाह छ, यो गलत हो महिला र हिट धेरै पछि ती प्रकट रूपमा सृष्टि गर्नुभयो । नक्षत्र सम्बन्ध रूपमा अंतर रहन्थ्यो र विविध रूपमा जीवन नै । हरेक महिला पर्छ, विली, निर्णय गर्न चाहनुहुन्छ कसरी व्यवहार । तपाईं आफैलाई सोध्न छन्, कसरी नजिक तपाईं यो मानिस साथ आउन चाहन्छु र यदि तपाईं चाहनुहुन्छ संभवतः रूपमा निराश प्रेमी । तपाईं सोध्न पर्छ कि विवाह को अन्य वास्तवमा खराब रूपमा उहाँले आफ्नो र कि वा छैन यो अनुमति दिएको छ मा भित्र पस्नु गर्न अवस्थित विवाह । अन्तमा, तपाईं गर्न चाहनुहुन्छ छैन, एक आफ्नै जीवन छ । यो नैतिक प्रश्न पक्कै महत्त्वपूर्ण छ । विशेष गरी भने बच्चाहरु खेल मा. हामी पक्कै पनि एक जिम्मेवारी छ के को लागि हाम्रो कार्यहरू छन्. तर हामी पनि एक जिम्मेवारी छ लागि हाम्रो आनन्द । पुरुष छैनन् विश्वासी र आत्मा मा अक्सर दुष्ट, थाह हरेक महिला । आफ्नो पनि भनेर चिनिने मानिसहरू अक्सर मात्र होइन मानसिक गएका दुष्ट, तर पनि वास्तविक । तपाईं पनि भने जाँच नक्षत्र मा आफ्नो सबै भेरियन्टका, एक थाह कहिल्यै गर्न सक्छन् जहाँ कथा समाप्त हुन्छ । संग प्रेम मा, एक विवाहित मानिस एक समस्या छ । यो जाँच गर्न आवश्यक छ कि, तपाईं एक सहायक सिंड्रोम र एक मानिन्छ अलोकप्रिय देखि यसको अनुमानित जीवन एक जीवित नरक मदत गर्न चाहनुहुन्छ. एक सोध्न पर्छ, कि पत्नी हुनेछ सायद बढी, र हुनेछ उपस्थित धेरै फरक सम्बन्धविच्छेद । तपाईं आफैलाई सोध्न छन्, के छ । भावना हो, एक कठिन कुरा गर्न प्रवेश मा तपाईं परिस्थिति जहाँ तपाईं बरु उठ छैन । सबै कसैलाई, सिद्धान्त मा, बारे सोचे विवाहित पुरुष, जब प्रेम छ । अभ्यास अरू केही छैन । कि तपाईं मा छलफल को शुरुवात सम्बन्ध, विवाह, मानिस, वा बारे मौन, बस, विभिन्न छ । ढिलो होस् वा चाँडो, तर यो छ एक विषय मा कम्तीमा एक आफ्नै प्राण । उहाँले भने आफ्नो जन्मदिन थियो संग मात्र पत्नी, र त्यसपछि मात्र संग प्रिय, हो, अझै पनि स्वीकार्य छ । तर क्रिसमस मा, नयाँ वर्षको पूर्वसन्ध्या र समयमा आफ्नो छुट्टी, एक्लै, हिट एक कठिन छ । विशेष गरी यदि यो धेरै वर्ष त, एक आश्चर्य किन एक जीवन. यो स्थिति लागि आह्वान र शोक । प्रिय सधैं आउँछ, दोस्रो स्थान मा र सबै को धैर्य, कुनै राम्रो गर्न उनको छ । मानिसहरू अक्सर संघर्ष- र संकोच छोड्न पुरानो सम्बन्ध छ । तपाईं आशा एक महिला खडा गर्न धेरै वर्ष को लागि एक प्रिय राख्न, तपाईं प्रतिज्ञा र मान्छे आशा तपाईं बुझ्न.
समस्या को प्रिय हुन र को अन्त मा यो गीत उहाँले छोडेर तपाईं
तर त्यहाँ पनि अर्को विविधता को कथा । केही महिला एकदम सन्तुष्ट छन् एक को सट्टा एक पत्नी । तपाईं आनन्द उठाउन सक्छौं एक मुक्त जीवन र जान्न हामी प्रेम जसरी छ । धेरै यस्तो सम्बन्ध विद्यमान सक्छ वा वर्ष, बिना पति छोडेर पत्नी । र यो भन्ने तथ्यलाई बावजुद को अनुपात दुई पूर्ण भङ्ग । पत्नी शायद पहिले नै थाह देखि उनको प्रतियोगी, तर त्यो मौन छ रूपमा पनि व्यवस्था छ । अन्त मा, सबै छन् पनि भने, तिनीहरूले संग सर्तहरू गर्न आउन यो अवस्था छ । प्रत्येक मनोवैज्ञानिक परिषद छ असफलता को अनुहार मा यो दोधार । के रहेको छ एक आफ्नै जिम्मेवारी, के एक बनाउँछ आफ्नो जीवन । शायद हरेक दोस्रो महिला भनेर एक पटक थियो को एक विवाहित मानिस बनाउन चाहनुहुन्छ, यो नरक कहिल्यै फेरि । कामदेव गरेको तीर गरेको गुमाएका, तर अझै पनि जारी हुन विवाहित मानिसहरू । हरेक महिला सोच्छ यो के कहिल्यै सक्छ । यो सम्म भयो । र त्यसपछि । के-के सल्लाह हुनेछ, तपाईं दिन उनको. यो प्रश्न हामी आफैलाई सोध्न हरेक परिस्थितिमा आफ्नो जीवन: हिम्मत गर्न केहि गर्न वा छैन छु लिएर कुनै संभावना छ । बिना जोखिम लिएर, तपाईं गर्न सक्दैन अनुभव, दुई वर्ष पछि, एक छोडपत्र र पनि एक पत्नी आफ्नो पक्षमा मा माथि. तर तपाईं के गर्न सक्दैन विपरीत छ । जीवन पूर्ण छ को जोखिम र केही निश्चित छ, लागि बाहेक मृत्यु भएको छ । दृश्य को बिन्दुबाट, को पत्नी को रेकर्ड मा प्रकट हुन्छ प्रेम एक विवाहित मानिस संग एक सम्पूर्ण विभिन्न दृष्टिकोण देखि. अक्सर, तिनीहरूले केही थाहा, उनको प्रतियोगी सम्म, एक यादृच्छिक को कथा । साथै, तिनीहरू विश्वास, के कहिल्यै सक्छ, वा तपाईं हुन सक्छ, जस्तै प्रतिद्वंदी, र सायद विभिन्न परिस्थितिमा, तर पहिलो, तपाईं गर्नुपर्छ आफ्नो आनन्द, भावनात्मक दोधार अक्सर मामला छ, संग महिला डर । मानिस डुबिरहेको मा खुशी को व्यभिचार र दोधार अक्सर उठ्छ मात्र भने, दाबी, वा एक जीवित निन्दा. धोखा को अन्त मा सबै तीन र जब बच्चाहरु थिए खेल मा, साथै । किन केही मानिसहरू मा एक आनन्दित सम्बन्ध, र अरूलाई. हाम्रो मुक्त ई-मेल कोचिंग, हामी जवाफ यी र अन्य प्रश्नहरूको वरिपरि विषयहरू साझेदारी र सम्बन्ध छ ।.
यहाँ यो जान्छ
← परिचितों - परिभाषा को परिचितों
वेब च्याट →